निम्तो बिना किन नेपाल आए पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासी, खुल्यो रहस्य !
काठमाडौँ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासी दुईदिने भ्रमणका लागि सोमबार दिउँसो नेपाल आइपुगेका छन् । उनी विशेष बिमानबाट ३२ सदस्यीय टोलीसहित नेपाल आएका हुन् ।
कुनै सभा सम्मेलन नभएको अवस्थामा विना औपचारिक निमन्त्रणा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासी नेपाल आउँदा सबैतिर सनसनीपूर्ण तरंग ल्याएको छ । उनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिन आएको बताएपनि उनी नेपाल आउनुको पछाडी अर्को कारण पनि लुकेको छ ।
नेपालमा हालै भएका संसदीय चुनावपछि वामपन्थी दलहरूको शक्तिशाली सरकार बनेयता नेपाल भ्रमणमा आउने पहिलो विदेशी सरकार प्रमुख अब्बासी नै हुन् । नेपालको निमन्त्रणामा भन्दा पनि उनी पाकिस्तानको इच्छाकै कारण नेपाल भ्रमणमा आएको बुझिएको छ । अब्बासीको यो भ्रमणले दक्षिण छिमेकी भारतलाई पक्कै पनि बेचैन बनाएको छ ।
अकश्मात किन आए अब्बासी नेपाल ?
पछिल्लो समय पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एक्लिँदै गएको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री अब्बासीको नेपाल भ्रमणले यस क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई कायम राख्ने प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री अब्बासीको भ्रमणको उद्देश्य क्षेत्रीय देशहरूसँग सम्बन्ध बढाउने दिशातर्फको ’पहलकदमी’ हो ।
मन्त्रालयद्वारा आइतबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो भ्रमणका क्रममा सार्कलाई एउटा बलियो र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनका कसरी बनाउने भन्नेबारे पनि छलफल हुनेछ ।’
दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति जनाउनका लागि पाकिस्तानलाई नेपाल अर्को सहज मुलुक हो । नेपाल हाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले पनि अब्बासीको नेपाल भ्रमण सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाको पहलका लागि भएको परराष्ट्रविद्हरुको तर्क छ ।
२०१६ मा सार्क शिखर सम्मेलनमार्फत पाकिस्तानले सार्कको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न चाहन्थ्यो । तर भारतले आफ्नो सैनिक ब्यारेकमा पाकिस्तानले आक्रमण गरेको भन्दै सो सम्मेलन बहिष्कार गरेको थियो । त्यसपछि अफगानिस्तान, बांग्लादेश र भुटानले पनि सहभागी नुहने बताएपछि सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित भएको थियो ।
नेपाल हाल सार्कको अध्यक्षको हैसियतले पाकिस्तानमा शिखर सम्मेलन गरेर उसलाई अध्यक्षताको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न आतुर छ । त्यसैले पनि पाकिस्तानमा शिखर सम्मेलन गर्न भारतलाई मनाउन प्रधानमन्त्री स्वयम् नेपाल आएका हुन् । उनको भ्रमणलाई कूटनीतिक जानकारहरूले दक्षिण एसियामा भू–राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने र कायम राख्न चाहनेहरुबीचको प्रतिस्पर्धाको रुपमा लिएका छन् । -नेपाल पानाबाट